Generation flop: ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်အလုပ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သာစေပေမယ့် 'သာမန်' မိန်းကလေးများနဲ့အိပ်ရာပေါ်လဲကျသွားတယ်။ Jeff Foster, MD (2019) - သင့် ဦး နှောက်သည်порноတွင်
အိုင်တီအသီးအသီးကြောက်တတ်သောအမှုသည်ယခုအချိန်တွင်ရဲ့ - သူနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂရုစိုက်ဟာရည်းစားနှင့်အတူအိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်း, ရစ်ကီ Granieri လုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။ (ဆောင်းပါးလင့်ခ်)
သို့သော်ထိုသို့စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင် 31 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ခဲ့, သူ့အခြားတစ်ဝက်ဖန်စီမ, တကယ်တော့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဆန့်ကျင်ဘက်စစ်မှန်တဲ့ခဲ့ကြဘူး။
"ဖြစ်ချင်တော့ကိုယ်ကပိုခက်ကျွန်မသူမကိုကြိုက်နှစ်သက်မှကြီးပြင်းအဖြစ်သူမ၏နှင့်အတူချိတ်ဆက် sexually တွေ့ရှိ" ဟုသူကပြောပါတယ်။
ရစ်ကီသည်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဗြိတိသျှလက်အောက်ခံ ၂၀၀၀ ကိုလေ့လာမှုအရ ၅၀ ရာနှုန်းသည်စိုက်ထူရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။
ရလဒ်အနေနဲ့ Viagra နှင့်အခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဘို့ဆေးညွှန်းများ၏အရေအတွက်နီးပါးပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းသုံးဆသိရသည်။
သို့သော်ရစ်ကီတကယ်တော့သူသည်အရပ်ရှည်ရှည်မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ချောမောင်မရှိ geek သို့မဟုတ်လူမှုရေး misfit ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏အားလပ်ချိန်များတွင်ထွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
Ricky သည်များသောအားဖြင့်အိတ်ထဲတွင်ရုန်းကန်ရန်မျှော်လင့်ရမည့်နောက်ဆုံးလူဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်သူသည် Erectile disfunction ကိုခံစားနေရသောလူငယ်များထဲတွင်တစ်ယောက်အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
"ငါသည်သူမ၏လိင်နှင့်အတူမချိတ်ဆက်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ ထိုအချိန်ကကျွန်မ porn ကြယ်ပွင့်နဲ့တူဖြစ်ခြင်းမသူမကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။
"ဒါဟာအစစ်အမှန်ဘဝမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း၏နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကသာမန်မိန်းကလေးများအတွက်နှိုးဆော်ခြင်းရရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ "
သူက "နာရီနှင့်နာရီ" ပြောပါတယ်အခါ, ရစ်ကီတကယ်ကဆိုလိုသည် - စောင့်ကြည့် porn နီးပါးအချိန်ပြည့်အလုပ်နှင့်တူဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူက ၀ န်ခံသည်မှာ“ ငါအလုပ်နောက်ကျမယ်၊ လိင်အကြောင်းအမြဲစဉ်းစားနေတယ်။
"ငါသည်ပင်ရုံးနာရီနှင့်ပျော်မွေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်အတွင်း loo ကိုသွားချင်ပါတယ်။
"ကျွန်မကလူအဖြစ်မိန်းကလေးငယ်များကိုမြင်လျှင်တော့ဘူး။ ငါအမျိုးသမီးတွေန်းကျင်ကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌နှိုးဆော်ခြင်းရပါဘူး။ "
သုတေသနလိင်မှာရှာဖွေနေခြင်းနှင့်အင်တာနက် 18 အသက်သင်ျခြိုယောက်ျား၏တတိယအကြောင်းကိုကွောငျးဖျောပွသ - သူတို့ရဲ့ပြဿနာအဘို့အ 40 အပြစ်တင် porn အသုံးပြုခြင်း။
ယောက်ျားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကြီးအကျယ်ပြဿနာ, တရာမိသားစုဆရာဝန်င်သူတို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အစောပိုင်း 20s မှာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိကြောင်းပေးထား ဒေါက်တာဂျက်ဖ် Foster ထပ်ခါထပ်ခါမြင်နေသည်။
"ကျနော်တို့က porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပျက်စီး undo မှရှိခြင်းကျန်ရစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ Starting Point သို့တစ်ခုဖြစ်သည်ပြောပြရန်ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိခြင်းသည်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
"ကျွန်မမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဆိုပါဂန္ကျပုံစံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကိစ္စများရှိခြင်းနေသောလူပျိုတို့ဖြစ်ကြသည်။
'၁၀ နှစ်ရှိနတ်သမီးပုံပြင်၊ ဗီဒီယို ၁၂ ခုနှင့်အပျိုစင်ဘ ၀ မှာ ၁၄ နှစ်ပျောက်ဆုံး'
“ အဓိကကတော့လူငယ်တွေကိုသူတို့ကစိုက်ထူမှုကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ (ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရဖို့) အကြောင်းပြချက်ကသူတို့ကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ချအောင်လုပ်ဖို့ပါ” ဟုသူကဆိုသည်။
ဤသည်ကိုအတိအကျသူတကျိပ်အခါ "ညစ်ပတ်မဂ္ဂဇင်း" မှာရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သူကိုရစ်ကီ, များအတွက်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။
နှစ်နှစ်အကြာသူ porn ၏ VHS တိပ်ခွေကိုတွေ့င်နှင့် 14 အားဖြင့်သူသည်မိမိအပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရချင်ပါတယ်။
ရစ်ကီကသူ့ 20 နှစ် porn အလေ့အထသူသည်မိမိအသက်တာကိုအများစုဘို့တစ်ခုတည်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်စာရငျးယူလေ၏။ သူကစိတ်ခံစားမှုနဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်သူ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထိုသို့အပြစ်တင် - ဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာထဲက။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ virile လုလင်တို့သည်တစ် screen ပေါ်မှာစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတွေဖလှယ်စေခဲ့သလဲ
ပြissueနာတစ်ခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမည်မျှပျံ့နှံ့နေသည်ဟူသောအချက်သည်ပြီးခဲ့သည့်လကဘီဘီစီလေ့လာမှုအရအသက် ၁၈ မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသားလေးပုံသုံးပုံသည် X-rated အကြောင်းအရာများကိုပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
porn နေပါစေသင်ဘယ်မှာခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမှာရရှိနိုင်ပါသည် - ပင်ဘတ်စ်ကားနဲ့ရထားပေါ်၌စောင့်ကြည့်မှလူတားမြစ်ဖို့ဥပဒေသစ်တောင်းဆိုမှုများရှိပါပြီယခုဖုန်းများပေါ်တွင်ဒီတော့အလွယ်တကူပါပဲ။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီနှင့်မြန်နှုန်းမြင့် streaming ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏အရုဏ် ၄၀ အောက်တွင်ပိတ်ပင်မှု ၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာလျှင်ပြissuesနာတက်နေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်ကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
'အချိုရည်သည် porn အကြောင်းတစ်ချိန်လုံးပြောဆို'
"Blokes ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ် watch, ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်စကားပြော" လို့သူကပြောပါတယ်။
သူတို့ uni မှာအတူတူလေ့လာနေကြသောအခါသူ၏အဆွေခင်ပွန်း၏အချို့ပင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သာရာရစေဖို့လပ်ချိန်ယူလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်လက်ငင်းဆန္ဒပြည့်ဒီလိုမျိုးအပေါ်မှီခိုသူတို့ရဲ့ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်, အထူးသဖြင့်လူအများတို့သည်အတူပင်ခက်ခဲအစစ်အမှန်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းလည်းရှက်စေသည်။
2,000 blokes နေရာ၌ရှိနေသော်လည်းသောအခါတကယ်တော့ရာခိုင်နှုန်း 27 သူတို့မဟုတ်ဘဲ erectile ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏မိသားစုဆရာဝန်စကားပြောထက်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရေးပေါ်သိမ်းထားချင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။
အဖြစ်ကဤလူတို့သညျကိုကြည့်ရှုသည်မည်မျှ porn မေးမြန်းခြင်း, ဒေါက်တာ Foster အကြံအဥာဏ်ငယ်အပြာရောင်ဆေးပြားထုတ်သတ်တဲ့ရန်လျော့နည်းဆန္ဒရှိရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အကြံပြုထားသည်။
"ဒီအန္တရာယ်ငါ၏အလယ်ပြင်၌ထှထှေကေုအများကြီးပြဿနာကိုကြားနှင့် Viagra မညွှန်ကြားသည်ကိုသို့ကျဆင်းနေကြတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
"တစ်ဦး 21 နှစ်အရွယ်ကပေးခြင်းများသောအားဖြင့်အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ "
ပို. ပို. သူတို့ကိုမှီခိုနေကြ Viagra ကြော်ငြာတွေအတွက် Pep တက်ကျေးဇူးတင်မီးခိုးရောင်ဆံပင်နဲ့လူလတ်ပိုင်း bloke ပြခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သစ်ကိုအဖြစ်မှန် 40s အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ 31-အရာတွေကိုရာခိုင်နှုန်း 30 Co-op ဆေးဆိုင်သည်နှင့်အညီ, သူတို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်အားဖြင့် Viagra ပေးထားပါပြီ။
သူကတကယ်-ဘဝဆက်ဆံရေးမှ porn ပိုမိုနှစ်သက်သဘောပေါက်လာသောအခါရစ်ကီရဲ့အလှညျ့အပွောငျးလာ၏။
"လေးနှစ်အကြာကငါပုံမှန်လိင်အသက်ကိုနိုင်အောင်ဒီထွက် sort ဖို့လိုအပျသဘောပေါက်" ဟုသူကပြောပါတယ်။
"ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနေရာတိုင်းမှာနေသောခေါင်းစဉ်: ပြွန်အပေါ်ဘတ်စ်ကား, ကြော်ငြာတွေပင်ရေခဲ-lolly ကြော်ငြာတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာခွေးများ၏ရှေ့မှောက်၌အစားအစာချပြီးနဲ့တူရဲ့။ ဒါဟာငါ့အ 20s စဉ်အတွင်းငါ့အဘို့လိင်ဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ "
ရစ်ကီသူမ၏ကျေနပ်အောင် sexually သူ့ကိုစိန်ခေါ်တဲ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ယခုဖြစ်ပါတယ်။
"အခုဆိုရင်ငါ porn မကြည့်ကြဘူး, ငါအဖြစ်အမျိုးသမီးများကိုမြင်နေရပ်တန့်သွားပါပြီ '' အရာ။ '' ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးအကြားကျန်းမာချိန်ခွင်လျှာကိုတွေ့ပြီးပြီ။ "
ဒေါက်တာ Foster ရစ်ကီ porn အအေးကြက်ဆင်ကန်ခွင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်သည်။
"ကျွန်မအနေနဲ့အရက်စွဲကဲ့သို့အလားတူ porn စွဲရှုမြင်ကြသည်။ သူတို့ကိုငါပြောပြသူများကလူများအတွက်, '' porn ကိုကြည့်တော့။ '' ဒါဟာတကယ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ '